LINYARMA LONGTIME UPS INVENTER 99% NEW YANGON YANKIN CANTER
Engine 7.5 hp With Starter motor & Recharger .
g/ပိသာာ/kg/lb ယူနစ်လေးမျိုးပါချိန်စက်( အသေး)
Morita japan used ref:
National japan used ref:
Hisense 1.5 hp
ပြသည် 1-8 ၏ 273 ပစ္စည်းများ.
ဤအပိုင်းတွင် မြန်မာ ရှိ အိမ်ထိန်းသိမ်းရေးလိုအပ်ချက်ကို အရာရာပြည့်စုံစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရောင်းချသည့်ပစ္စည်းများတွင် ဖုန်စုပ်စက်များ၊ အဝတ်လျှော်စက်များ၊ ပန်းကန်ဆေးစက်များ၊ အနွေးပေးစက်များ၊ ပန်ကာများ၊ ရေခဲသေတ္တာများ၊ လေသန့်စက်များ၊ လေအေးပေးစက်များနှင့်အခြား ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ ရရှိနိုင်သော ပစ္စည်းများတွင် ပါကင်ပိတ်ပစ္စည်းအသစ်များ သို့မဟုတ် အနည်းငယ်သာသုံးရပြီးသော ပစ္စည်းများနှင့် အပိုပစ္စည်းများအဖြစ်ရောင်းသည့် ပစ္စည်းဟောင်းများပါဝင်သည်။